Nezvedu - Shijiazhuang Congqia Apparel Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Congqia zvipfeko zvekutengeserana co., Ltd. inyanzvi yenguvo kambani inosanganisa kutengeserana uye kugadzira. Inowanikwa muShijiazhuang, kuchamhembe kweChina. Isu takasarudzika mune zvekupfeka, softshell bhachi, chengetedzo jasi, chikoro kupfeka, hembe / t-shati, nezvimwe.
Tine mafekitori maviri padyo neguta redu. Vashandi vese vanobva kunzvimbo yemuno. Iko kugona kwekugadzira kwakagadzikana mukati megore rose. Uye imwe yefekitori yedu yakapfuura BSCI odhita uye ISO9001. Parizvino, mamwe mafekitori maviri matsva ane vashandi zana ari kuvakwa. Iko kugona kwekugadzira kuchawedzerwa zvakanyanya kubva ku2019.
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kutengeswa kumusika weEurope uye zvinonakidzwa nemukurumbira wakanaka kwazvo pakati pevatengi. Tine zvikwata zvehunyanzvi uye zvine ruzivo zvekushandira pamwe nevatengi. Isu zvakare tine timu yehunyanzvi yakasimba inoshanda pane akasiyana maitiro ekugadzira. Iyo yakasimba yemhando yekutonga inotorwa kubva pakutanga kusvika kugadzirwa kwapera. Yekutanga-kirasi mhando, yakanaka mutengo uye pa- nguva kuendesa ndiyo yedu yepamusoro vimbiso kune wega mutengi.
Unogamuchirwa noushamwari kuboka redu. Iko kufara kwedu kuvaka hukama hwakanaka hwebhizinesi nevatengi pasi rese.